Voakasika amin’izany ny fampidiran-ketra eny anivon’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana eto amin’ny Faritra Analamanga. Niainga avy tamin’ny tranga niseho tamina kaominina iray teto amin’ny Faritra Analamanga no nitsirin’ny hevitra nikarakarana ity atrikasa ity. Tanjona ny hampahafantarana ny andraikitry ny tsirairay avy amin’ny loharanom-bola eny anivon’ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ireo fa eo ihany koa ny mba ahafahana manitsy izay lesoka rehetra amin’ny fomba fampidiram-bola. Aorian’ny atrikasa dia azon’ny fanjakana ampiasaina ny antontan-kevitra mivoaka avy amin’ny atrikasa ary ahafahana mandrafitra lalàna raha ilaina. Ny hetra avy amin’ny fandraharahana ataon’ny mpandraharaha no anisan’ny loharanom-bola mampihodina ny raharaham-panjakana eny amin’ireny vondrom-bahoaka hitsijaram-pahefana ireny izay miteraka ny fampandrosoana eny anivon’ny kaominina. Ho an’ny vondron’ny mpandraharaha, milaza izy ireo fa tsy mandà ny adidy amin’ny fandoavan-ketra saingy ilaina sady takiana kosa, hoy izy ireo, ny fametrahana ny mangarahara.